Izesekeli | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
I-Perfect Descent Lanyard Guard
Le tubing ethambile, ecacile ilingana ngokuphepha ngaphezu kwanoma iyiphi imodeli umsila wenkomo ongu-220/230, okwenza kusheshe futhi kube lula ukuhlanza nokufaka amagciwane ezintweni ezithinta kakhulu ngenkathi kunciphisa ukuvezwa kwamakhemikhali okuphindaphindiwe. I-Lanyard Guard iphinde inikeze ukumelana nomhuzuko futhi ivumela ukuhlolwa okubonakalayo kwemisila yenkomo ngaphandle kwesidingo sokususwa. Kulula ukufaka kuma-lanyard amasha futhi akhona ngokufanayo.
KUBALULEKILE: Ukubuka ukufakwa kwevidiyo chofoza lapha. Ukuthenga ku-Aerial Adventure Technologies chofoza lapha.
Isisindo: 5.6 oz (158 g)
Ubude: amasentimitha angu-18 (45 cm)
Okubalulekile: Sula iVinyl (evuselelwa kabusha)
Isikhathi sokuphila: umkhawulo weminyaka engu-2 (ngokufana nomsizi wenkomo obuyiselwayo)
Thola umthengisi kabusha eduze kwakho
Isango Eliphelele Le-Auto Belay
I-Perfect Descent Auto Belay Gate ingumlingani okufanele ube naye we-auto belay yakho. Dala iphuzu lokungena ngesiqeshana se-auto belay lapho lingasetshenziswa ngezikhathi zokusebenza. Amasango ethu e-belay ayikhomba ngokusobala imizila ye-auto belay ejimini yakho futhi akhumbuze abagibeli ukuthi bangene kuyo ngaphambi kokukhuphuka.
Njengoba imisila yenkomo i-auto belay ivikeleke kuluphu olungaphezulu, iSango le-Auto Belay liba yisithiyo ngokomzimba esimboza izintambo eziqala emzileni futhi sinciphise nethuba lokukhuphuka ngaphandle kokunqampula kuqala. Idizayinelwe imiyalo yezithombe eyenza kube lula ukuyiqonda kunoma iyiphi ulimi, ziyithuluzi elibalulekile lokulawula ubungozi lapho kusetshenziswa khona ama-auto belays. Ukubonakala okuphezulu kombala ophuzi nemiyalo ecacile kukhumbuza abagibeli ukuthi bangene ngaphakathi ngaphambi kokukhuphuka. Lapho isango libekwe phansi, uhlangothi olubheke emuva lukhombisa indawo yokufika komqali ongenhla.
Luhlala Isikhathi Eside 18 oz camera camera
I-loop-in loop ephezulu eqinisiwe
Amathebhu e-webbing asezingeni aphansi ashintshekayo amaphoyinti ehange aguqukayo
Imichilo engezansi ingafakwa ngezingodo eziboshiwe, isikulufa esisezandleni, noma iziphanyeko zebhawodi
Ukubonakala okuphezulu kokuklanywa okuphuzi nokumnyama
Izithonjana nolimi olwenzelwe ngokuhambisana nezindinganiso zezimpawu zokuphepha ze-ISO ne-ANSI
KUBALULEKILE: Uma ingasetshenziswa, imisila yenkomo ye-Perfect Descent Auto Belay kufanele ibuyiselwe ngokuphelele ezindlini. Lokhu kuzokwelula impilo yentwasahlobo yokuhoxa. Umugqa wethegi ungaxhunywa ku-carabiner ukuthola nokubuyisa imisila yenkomo lapho ingasetshenziswa.
Isisindo: 1 lb (0.45 kg)
Ubukhulu Bamasango: 36 in (91.4 cm) Wide x 39 in (99 cm) Tall [Akubandakanyi I-Loop Ephezulu Nama-Strap Adapter]
Okokusebenza Kwamasango: IVinyl Eboshwe nge-oz
Okuphezulu Kokubhoboza I-Loop: 1 in (2.5 cm) Heavy Duty Tubular Nylon Webbing
Okuboshwe Kokubhoboza Ngezansi: 1 in (2.5 cm) Polypropylene Webbing
Ukulungiswa KweBuckle Material :: 1 in (2.5 cm) Plastic
I-Perfect Descent Auto Belay Replacement Lanyard
I-Perfect Descent Auto Belay Replacement Lanyards ihlala isikhathi eside, ingashintshwa kalula ngaphandle kwensizakalo yokubuyisa, futhi inikezwa ngenhlanganisela yama-carabiner amaningi nobude. Ukushintshwa kuyisifinyezo futhi kungaqedwa ngemizuzu embalwa. Yiba nemisila yenkomo eyisipele esitokisini ukuze ugcine amayunithi esebenza isikhathi esingaphansi sokuphumula.
Kulula ukumiselela imisila yenkomo kuthatha imizuzu ukuyishintsha futhi kungenziwa ensimini ngumsebenzisi wokugcina.
Khetha ubude bemisila yenkomo obuhlangabezana kahle nezidingo zakho: 28 ft, 40 ft, noma 53 ft (8.5 m, 12.2 m, noma 16.1 m).
Ukubekwa kwelayiloni kwekhwalithi ephezulu kusebenziseka kalula kunezinhlelo ezisekelwa ngekhebula futhi ngeke kulimaze izindonga.
Isibonisi sokugqoka esakhelwe ngaphakathi sikhipha ukuqagela ngokwazi ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha imisila yenkomo yakho.
Umbhobho we-aluminium odidiyelwe uhlanganiswe nomsila wenkani wokuqina nokusebenza.
Khetha kusuka kuzinketho ezimbili ezi-3, zeswivel carabiner: i-aluminium yezindawo ezonakalisayo noma ukunciphisa isisindo nensimbi yensimbi yokuqina. Noma khetha inketho ye-Dual Connection nge-swivel, nylon Y dogbone tether, kanye ne-aluminium embaxambili, izigaba ezi-2 zabathunjwa be-pin carabiners.
QAPHELA: Umsebenzisi angafaka imisila yenkomo emide ngemilambo emifushane ukuze afake izindawo eziphakeme eziphakeme. Ungalokothi ubuyisele umsila wenkambo omfushane ngentambo ende ngoba iyunithi ngeke lisebenze kahle. Imisila yenkomo emide ingafakwa kuphela yi-C3 Manufacturing noma isikhungo sesevisi esigunyaziwe.
Isisindo: 1 - 2 lbs (0.45 - 1 kg)
Izinto (Zemisila yenkomo): 1 in (2.5 cm) Webbing Wide Nylon
Amandla okuphuka kweLanyard: 3,500 lbs (15.6 kN)
(Ama) Imisila yenkomo: 28, 40, noma 53 ft (8.5, 12.2, noma 16.1 m)
I-Perfect Descent Belay Bar Mounting Kit
I-Belay Bar Mounting Kit ingafakwa ngokushesha futhi kalula kumabha we-belay akhona ukudala iphuzu lokuncamathela le-Perfect Descent Auto Belays. Ibhande lenayiloni elibanzi liqinisekisa ukuthi ihange lihlala endaweni futhi livimbela ukulimala ebusweni bendawo. Isihlibhi sokusekelayo sifakiwe futhi kufanele sinamathiselwe kwi-anchor yesibili efanelekayo ongayithola. I-Belay Bar Mounting Kit ilula ukususa njengoba injalo ukufaka, ikuvumela ukuthi uthuthe kabusha i-Perfect Descent Auto Belays yakho njengoba kudingeka.
IBelay Bar Mounting Kit yindlela yokudlula, isixhumi sesitayela se-choker anchorage. Yenziwe nge-webbing ye-5 intshi ye-polyester, ikiti yokufaka ifaka insimbi eyakhiwe kanye ne-zinc ezifakwe i-D-ring kanye nokulingisa okusekelayo kanye nensimbi yomgunyathi ne-zinc. I-Belay Bar Mounting Kit kufanele isetshenziswe ngendwayimane yokusekelayo yesibili futhi ibha ye-belay kufanele iboshwe kuzo zombili izinhlangothi ukuvimbela ukuthi ibhande lingasuki. Buza kumakhi webha ye-belay yakho nodonga olukhuphukayo, noma ngonjiniyela ofanelekile ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lwakho luyakwazi ukuxhasa imithwalo elindelekile.
Isisindo: 3 lb (1.4 kg)
Amandla Okuphula Okuncane: 5,000 lbs (22.2 kN)
Ububanzi obuphansi be-Belay Bar: 2.5 in (63 mm)
Ububanzi beBaray Bar enkulu: 4 in (102 mm)
Amandla Esisindo: Ama-350 lbs (159 kg) Isisindo Esihlanganisiwe se-Auto Belay ne-Climber
I-Anchor Strap Material: I-Polyester Webbing
Amandla Wokubopha I-Anchor Strap: 6,000 lbs (26.5 kN)
Izinto ze-D-Ring Hardware: Insimbi ehlanganisiwe, iZinc Plated
Amandla okuphula i-D-Ring: 5,000 lbs (22.2 kN)
Isipele Sling Material: Inayiloni Webbing
Isipele Sling Breaking Strength: 5000 lbs (22 kN)
Carabiner Material: steel kokuzihlanganisa, Zinc Plated
Amandla Okuphuka KweCarabiner: 9,200 lbs (41 kN)
I-Perfect Descent Bodyguard
IBodyguard yakhelwe ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuphelele kochungechunge lwePerfect Descent 220/230 i-Auto Belays, kufaka phakathi amamodeli weSpeed ​​Drive kanye neDirect Drive. I-Bodyguard ifaka ungqimba lwe-padding olunamathela ngokuphepha kwi-auto belay, umsindo wokunciphisa nokuvikela icala nodonga lwakho olukhuphukayo ekulimaleni. Isigaxa sokukhiya ileli entanjeni ephezulu sivumela i-Bodyguard ukuthi ifakwe futhi isuswe ngenkathi i-auto belay ifakwa, okwenza ukufakwa nokususwa kube lula futhi kusheshe. I-Bodyguard kufanele ibe nesesekeli sokutshalwa kwezimali kwakho kwe-auto belay.
Isisindo: 0.2 lbs (0.09 kg)
Izinto Zokufaka: I-Foam Yeseli Evulekile
Ukukhweza Ibhande Lokubopha: 3/4 ku-Heavy Duty Elastic
I-Sheath Material: Inayiloni eyi-1000D eyenziwe nge-Cordura Nylon
I-Ladder-Lock Buckle Material: I-Thermoplastic enjiniyela